بتحصل - betahssul - iyenzeka Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
« Ukugqitywa kokusebenza + kwesandi kunye noMerey Şenocak kunye noSteve Schofield | INDLELA
Nge-8 ka-Okthobha, uZeo-rapper, umenzi wefilimu, umvelisi womculo kunye netshantliziyo- uzakube eqala ukudlala icwecwe lakhe, eqaqambisa imeko yezopolitiko nezopolitiko eSudan, isandi sokuchasa kunye nenkcaso ngokuchasene neJanjaweed. Amajoni axhaswa ngurhulumente afumana udumo ngokubulawa ngokungenalusini kwabahlali kunye nabaqhankqalazi ngexesha lotshintsho olunoxolo ngo-2019. Eli cwecwe likhatshwa ziimvumi ezininzi ezahlukeneyo, kunye uZeo wenza umnikelo kwihlabathi kunye notshintsho kwezentlalo. Kumcimbi wokukhutshwa kwelicwecwe, umrepha owaziwayo waseSudan uWad Almzad uyakumenywa ukuba abambe kwaye axhase le nkulumbuso. Zombini uZeo kunye noWad Almzad bamele amazwi esizukulwane saseSudan, abakha ngokutsha kwaye bahlengahlengisa uhlobo lweRap kwaye bachaza ngokutsha umdlalo weSudan Rap. Ikhonsathi iya kumodareyithwa ngumculi obonwayo kunye ne-activist u-Eythar Gubara kwaye ihamba kunye nomlando waseSudan, u-Elwalid Yousf, kunye ne-Sonic In (ter) yodwa kuphela, e-Berlin-based based trance music form. U-Ibrahim Aljrefawi ufuna ukunceda ekuphunyezweni kobugcisa.
Iprojekthi ifezekisiwe ngenkxaso yeCivic Lab Sudan kwaye ixhaswe ngemali yiMRI (Martin Roth Initiative), Rosa-Luxemburg-Stiftung, Bosch Stiftung kunye neGoethe Institute.
Ikhonsathi iya kulandelwa yingxoxo yephaneli ngo-Okthobha u-10 kunye nenye ikonsathi ePavillon Hannover ngo-Okthobha u-15.
UMustafa Elsiddig, owaziwa njengoZoyo sisizwe saseSudan, wazalelwa eWad Madani. UZoyo wakhulela e-United Arab Emirates, e-Al-ain. Wawuthanda umculo weRap kwaye waqala ukuwulandela xa wayeneminyaka eli-16 ubudala. Ekuqaleni, wayehlala ebhala umbongo kodwa engakwazi ukuqonda ukuhamba. Nangona wayebuthanda obu bugcisa, kwakungumceli mngeni, njengoko engumntu othintithayo. Kude kube lusuku olunye adlale ukubetha akufumene kwiYouTube, kwaye wazama ukudlwengula kuyo. Kulapho ke wafumanisa ukuba uyakwazi ukudlala, ukusukela ngoko akayeki.Umculo kaZeyyo yindawo yothuthuzo. Njengokuba wayenobuntwana obunzima ngenxa yemeko yakhe yokuthintitha, wakhula waya kuyo, ngokwenza obu bugcisa. Ngayo wafunda izakhono ezongezelelweyo ezinje ngokwenza, ukubetha, ukuhlela ividiyo kunye nokufota. Uzabalazela ukuguqula nakuphi na ukungakhathali aphantsi kwakhe abe yedwa ukuba kuluncedo ekukhuleni kwakhe. Injongo yakhe kukubonisa oko yena nabanye badlula kuko ngenxa yokucinezelwa kwenkululeko eyenziwa ngurhulumente wephiko lase-Sudan. Uzabalazela ukuseka iqonga elizweni lakhe, ukunceda amagcisa aguqukayo, angenalo ithamsanqa lokusebenzisa ubugcisa bawo, ngenxa yeemeko zokuphila ezinzima abahlangabezana nazo ngenxa yoburhulumente.
> IG: @Zeyo
UKhaled Ezzeldeen Osman Farhat, okwabizwa ngokuba nguZangola, okanye uWad Almzad wazalelwa e-United Arab Emirates, uchithe ixesha elininzi lobomi bakhe kunye nemveliso yoyilo eSudan. Emva kokusebenza njengo-DJ wafumana inkuthazo eninzi kuZoyo nangokuphuhliswa kwesimo seRap eSudan kwiminyaka eyakhokelela kwimvukelo yoxolo ngo-2018. Oko kwamkhuthaza ukuba aqhubeke nomsebenzi wobukrelekrele kunye nemvumi. Kwi-2019 waqala ngokukhululeka, kuba le yayiyeyona ndlela ilula kuye yokusasaza umyalezo wakhe wokuxhotyiswa, ithemba, ukuzixabisa kunye noluntu kubo bonke abantu baseSudan. Ikhonsathi uZangola ebibanjwe ngeyoMnga ngo-2020 itsala abaphulaphuli abangamawaka amathathu abalandeli. Ezi konsathi zilandelayo kuye kwanyanzeleka ukuba zirhoxiswe ngenxa yezizathu zobhubhane kwaye ngo-Epreli 2021 wabamba ikonsathi yakhe yesibini, eyayizinyaswe ngamanye abalandeli abangamawaka amane, ngokuthe ngcembe ikhula ngokubalaseleyo phakathi kwabantu abancinci baseSudan. Okwangoku uneminyaka engama-28 ubudala kwaye unesiseko sakhe esiphambili eKhartoum, eSudan, kodwa uhlala esiya kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi ngokusebenzisana nomculo.
> IG: @iamfanlalisa
Imvumi yaseSudan, wazalelwa eKhartoum Sudan e1966
Ufunde kwiYunivesithi yoMculo kunye neTheatre Khartoum / Sudan
* Amalungu asekwayo eSawra Music Band (1991-1994)
* Amalungu e-Igd Elglalad Music Group (1996-1997)
Ngo-1997 bafudukela eJamani
* Iikonsathi: Kwizixeko zaseSudan nakumazwe aseArabhu, eParis ("Iziko leLizwe lama-Arabhu") Holland (uMnyhadala weNtlanganiso yoMculo), eAmsterdam, eHague, eLeiden ... eJamani (iNdlu yeeNkcubeko zeHlabathi eBerlin) eFrankfurt am Main, eCologne, IHanover ... eLondon, eDublin, eSalzburg ...
Uncedo lwe-Sonic In (ter)
I-Sonic In (ter) ii-ventions yiseshoni yejamu yeveki yeemculo zomculo wehlabathi. Njengabasebenzi bezenkcubeko abaphendula kumaxesha ngokwakhiwa koluntu, iinginginya ziyadibanisa isandi kunye nokuphilisa ukwenza iiseshoni zeyure ezingama-5 + zokuphuculwa kwamandla. Iindawo zoluntu ziphinde zacatshangelwa njengeendawo zokucamngca ezisebenzayo zokumbiwa kwembali, uqhankqalazo loovimba, kunye nokusebenza ngobuchule. Iimpawu zobugcisa ezivulekileyo nezasimahla zilinywa ngenjongo yokwabela abaphantsi amagunya kunye nokubhiyozela inkqubo yemveliso yolwazi ngokusebenzisa iindlela zobugcisa ezisekwe kumdaniso nomculo.
> IG: @kweenkanye
UGubara wazalelwa eKhartoum, eSudan, kwaye unesidanga sobunjineli bekhompyuter eyunivesithi yase-Saudi Arabia. Emva kokuba eqale njengomfoti ozifundisayo eneminyaka engama-20, waya kwiindibano zocweyo kwiziko lenkcubeko laseJamani- iGoethe-Institut - apho wazimanya nabanye abafoti baseSudan, ababephuhlisa izakhono zabo zobugcisa nezobugcisa. Imifanekiso yakhe ebonisa ukubandakanyeka kwamalungelo oluntu kwaye ngokukodwa ukungalingani ngokwesini kwabasetyhini eSudan kubonisiwe kumaphephancwadi e-intanethi afana nombutho wamalungelo oluntu uDawn MENA kunye neGoethe-Institut Sudan. Iqela lika-Assil Diab, limi phambi komzobo waseludongeni womzabalazo obulewe ngexesha lenguquko kwi-BBC News 'iVeki yeAfrika kwimifanekiso' ngoJulayi 2019. NgoJuni 2020, iMOM Art Space eHamburg yabonisa umboniso wakhe 'we-3 kaJuni', ebonisa Zombini ezi ziganeko zopolitiko zenzeka eKhartoum phambi kokubulawa kwabantu eKhartoum, kunye nemifanekiso yabantu abahlala phantsi kwalowo wayesakuba ngurhulumente waseSudan. Ngo-2021, wabonakaliswa phakathi kwezinye iifoto zaseSudan zangoku kwincwadi yesiFrentshi iSoudan 2019, année zéro.
> IG: @iqosweb
Umbhali waseSudan, umyili womxholo kunye nomenzi wefilimu osekwe eJamani. Uyaqhubeka nokufunda ifilimu kwiHamburg Media School njengoMenzi wefilim. U-Ibrahim ungumsunguli weqela lenkcubeko loMsebenzi nelinye lamaqela enkcubeko asebenzayo eKhartoum. U-Ibrahim uphumelele amaxabiso ahlukeneyo emiboniso bhanyabhanya kunye namabhaso avela kwi-DDF nakwiinethiwekhi ezizimeleyo zoMzantsi Afrika, unamanqaku awahlukileyo malunga nenguquko yaseSudan, ubugcisa kunye nengqiqo yenkcubeko ecociweyo kwiindawo ezininzi zosasazo zasekuhlaleni nakwamanye amazwe kunye namaphepha eendaba ezidijithali.
> IG: @aljrefawi
Ikhava ye-albhamu / uyilo lweposta ngu-Israa M. Ali @ i.moe.ali
Nceda uqaphele: Ukuthatha inxaxheba kwimisitho e-Oyoun okanye undwendwele imiboniso yethu, kuya kufuneka ukuba ube novavanyo lwe-corona olubi ukusuka kwangolo suku okanye ubungqina bokugonywa / bokuchacha. Iimaski ze-FFP2 zinyanzelekile e-Oyoun kude kube kukwazisa esinye. Ulwazi oluthe kratya malunga nengqondo yethu yezempilo inokufumaneka apha: oyoun.de/hygienekonzept
Al Troubaz - ikonsathi
Nge-11 kaDisemba nge-19 ngokuhlwa